PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - UMengameli Zuma nabangcwabi
UMengameli Zuma nabangcwabi
Isolezwe - 2017-09-15 - IZINDABA - JOHN NGCOBO
IZOVULWA nguMengameli Jacob Zuma ingqunguthela yabangcwabi, iNational Funeral Indaba ezoba se-Inkosi Albert Luthuli Convention Centre (ICC), eThekwini, ngoLwesibili.
Ingqungquthela ihlelwe inhlangano yabangcwabi kuzwelonke iNational Funeral Practitioners (Nafupsa).
UMnuz Prince Gumede weBorn For Greatness Media ekhulumela le ngqungquthela emphakathini uthe uZuma uzosika elijikayo ngokufanele kwenziwe ukuze kuxazululwe izinkinga ezibhekene nebhizinisi nokusizwa kwabashonelwe.
Ingqungquthela izoqala ngoLwesibili iphele ngoLwesine. Kulindeleke ukuthi kufike wonke umuntu osebhizinisini lezokungcwaba azozizwela. Abazofika engqungqutheleni bazothola ithuba lokubeka imibono yabo ngezinto ezithinta imboni yezokungcwaba.
UGumede uthe umongo wengqungquthela ukuxoxa ngazo zonke izinkinga ezibhekene naleli bhizinisi nokuthi kungafinyelelwa kanjani ezisombululweni ezizovuna wonke umuntu ohweba ngalo.
Okunye okulindekele ukuthi umengameli akhulume ngakho, ngamasu okuhlomisa osomabhizinisi abakuleli bhizinisi abazithola bebhekene nemithetho ebadidayo uma benza umsebenzi wabo.
Kuzodingidwa izindlela okufanele zisetshenziswe uma abangcwabi bexhumana nomphakathi ongamakhasimende abo.
Kuzodingidwa neqhaza labangcwabi besifazane neminye imisebenzi ekhona kule mboni kodwa enganakekile.
“Okubaluleke kakhulu ngale ngqungquthela wukuthi abakulo msebenzi nomphakathi wonkana bazokhanyiseleka ngokwenzeka ngezinto eziningi nebezifehlekile phambilini, ezinye zazo ebezihambisana nokucindezela. Konke kuzocaca bha kulezi zinsuku ezintathu,” kusonga uGumede.
Ngaphandle kokubonisana ngendaba yebhizinisi, abazobe behambele ingqungquthela bazokwehlisa izingxoxo ngomculo. Kuzobe kukhona umculi wowokholo uMalusi Mbokazi, uLebo Sekgobela, Sjava, Amanda Black, Thinah Zungu, Abakhethwa nabanye.
NgoLwesibili kuzoba nesidlo sakusihlwa esizobe sihanjelwe nguDkt Nkosazane Dlamini-Zuma obenguSihlalo we-African Union nomlingisi weSibaya uNomzamo Mbatha. Uhlelo luzobe luphethwe umsakazi woKhozi FM uDudu Khoza. Kuzobe kukhona nabanye abasakazi okubalwa uSelbyonce woKhozi noFelix Hlophe weGagasi FM.
NgoLwesithathu nangoLwesine kuzobe kunemibukiso yemikhiqizo eyehlukene yezinkampani zemingcwabo nezinye izinto abasiza ngazo imiphakathi.
Kulindeleke ukuthi kukhulume noMnuz Andile Mgxithama wenhlangano elwela ukubuyelwa komhlaba kubantu iBlack First, Land First.
KULINDELEKE ukuthi ivulwe ngumengameli wezwe uMnuz Jacob Zuma ingqungquthela yabangcwabi iNational Funeral Indaba ezoba seThekwini kusukela ngoLwesibili kuze kube nguLwesine